Biographie - Lalamasaka Hatry ny Ela
par Lalamasaka Hatry ny Ela · Published 22 mars 2020
Fiangonana Jesosy Mamonjy Ankorondrano 2007 Ny Fiangonana Jesosy Mamonjy dia fiangonana kristiana miorina eto Madagasikara sady efa miely any ivelany koa. Niorina ara-panjakana tamin’ny 1963 teto Madagasikara ny Fiangonana Jesosy Mamonjy taorian’ny asa fitoriana Filazantsara nataon’ny Misionera Amerikana Mounir Aziz Daoud sy Jane Collins vadiny. Tao Ankorondrano, Antananarivo Madagasikara no misy ny foibeny. Manana fiangonana miorina manodidina ny 1000 izy amin’izao taona...
par Administrator · Published 18 décembre 2019 · Last modified 1 avril 2020
Misionera sady Mpanonta Baiboly. Teraka tao Iraq ary lehibe tany Egypta. Nanangana ny ozinina lehibe mpanota Baiboly izy sy ny vadiny Jane Collins Daoud tao Dallas Texas, dia ny International Bible Association, toerana fanotana Baiboly lehibe izay mandika sy mizara Baiboly amin’ny fitenim-pirenena maro. Izy ireo no Mpanorina ny Fiangonana Jesosy Mamonjy eto Madagasikara, izay hany fiangonana naoriny tamin’ireo firenena...
Mpitory Filazantsara nitety an’izao tontolo izao nandritry ny 50 taona nihoatra. Namonjy olona anapitrisa tamin’ireo asa fitoriana nataony, tany amin’ireo firenena Afrikana, Asiatika, Amerika atsimo, Moyen-Orient sns… Fahagagana maro no niseho nandritry ny fivoriana nataony. Nanangana ny ozinina lehibe mpanota Baiboly izy sy ny vadiny Mounir Aziz Daoud tao Dallas Texas, toerana fanotana Baiboly lehibe izay mandika sy mizara Baiboly...
Total page view: 11,693